Je Wanda & Co uye NAJA International Production Boka kusaina kusati kwamboitika kwevatevedzi audiovisual mubatanidzwa -TRRAY
Gnepa-Joël Anani, weIvorian uyo anokurudzira kurima mumadhorobha ...
Kuongorora kuseri kwezviitiko zve "hondo" pamusoro peCEMAC -…
Orange Senegal: nei ruvengo rwakawanda? - Mudiki Africa
Ini Wanda & Co uye NAJA International Production Group vanofara kuzivisa hukama hwakasarudzika pakati pemasangano avo maviri. Chokwadi, makambani maviri eCameroonia akaberekerwa muwebhu afunga gadzira ruzivo rwavo uye kuziva-nzira yekubika-gadzira chirongwa kuburitswa kumapuratifomu avo epamhepo izvo: Ini Wanda uye NAJA TV.
Mune mamiriro eCameroonia umo iyo Internet ichiri kutora zviratidzo zvayo mune zvehupenyu hwezuva nezuva, ndizvo kusawirirana kusati kwamboitika pakati pevatambi vaviri vakachena * mune chikamu. Kekutanga, makambani maviri ewebhu media anobatanidza mauto. Uchapupu hwekuti kutanga kwekuvhunduka kweInternet nehuwandu hwekupinda kuchine 30% kusatyisidzira vaviri veCameroonia vanobatana kupa zano mukuchangobva kuitika mune chikamu.
Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti makore matatu apfuura akave akawandisa maererano nekugadzirwa kwevateereri pawebhu muCameroon. Nekudaro kuburitsa matarenda mazhinji dzimwe nguva achiri kusazivikanwa kuruzhinji. Chinongedzo chakakurudzira Je Wanda & Co uye NAJA International Production kuti batanidza hunyanzvi hwavo kuburitsa zvemukati zvevateereri vavo online uye kupfuura. Iko saka ufakazi iyo yakambovhenekera zvakare kushamisika uye simba rakasimba rewebhu muCameroon.
Izwi rinobva kuCéline Victoria Fotso, Muvambi uye CEO weJe Wanda & Co
"2020 inomiririra isu gumi remakore gumi raJe Wanda Magazine, saka gore rino rakamisikidzwa nehuwandu hwekudyidzana. Zviri saka nemafaro makuru kuti kwenguva yekutanga, tiri kubatana nemauto newebhu tv, NAJA TV, yatinogoverana naye imwe chiratidzo chekuita bhizimusi. Pane zvakawanda zvekuvaka paInternet sevanhu vemuAfrica, zvekuti zvinonzwa zvakanaka kuzviita nekambani yechidiki sesu, inotikwanirisa, uye yatinogoverana tsika dzakafanana uye zvishuvo zvakafanana. Icho zvakare chiratidzo chekuti pavanenge vachida uye kana mamiriro ezvinhu aripo, maAfrica vanoziva mashandiro pamwe. "
Izwi rinobva kuna Wesleg Nanse, Co-muvambi uye Managing Director we NAJA International Production Group
"Kudyidzana kwakasimbiswa neNAJA Production naJe Wanda & Co chiitiko chine hunyanzvi mukugadzirisa hunyanzvi hwedu kupa neruzhinji mukana wakawandisa, zvemhando yepamusoro. Isu tinofara kwazvo kuti tatanga iyi nhambo. NAJA International Production kambani ine vatano vanoverengeka; izvo zvakati, isu tagara takanzwisisa kukosha kwekuuya pamwechete kuzadzisa zvinhu zvikuru. Huchenjeri hweAfrica hazvitauri here kuti isu toga tinokurumidza kuenda, pamwe chete isu tinopfuurira mberi? Hapana mubvunzo kuti kuzivikanwa kweJe Wanda nevateereri vadiki uye ruzivo rwekuburitsa audivo rweNAJA International Production ichave pfuma chaiyo mukutigonesa kukunda vateereri vatsva. "
* 100% madhijitari edijiti anoshanda chete online
Iyo Network RP
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.jewanda-magazine.com/2020/07/je-wanda-co-et-naja-international-production-group-signent-un-partenariat-inedit-de-coproduction-audiovisuelle/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=je-wanda-co-et-naja-international-production-group-signent-un-partenariat-inedit-de-coproduction-audiovisuelle
🔴 【ZVINODZIDZWA PARADISE
Cameroon: Emmanuel Néossi ari pakati penyika isina kumbobvira yaitika